» WAR HADA SOO DHACAY: Dagaal Caawa ka dhacay No: 50 iyo Biyo maal oo dib ula wareegay + Wararkii Ugu danbeeyey
Faah-Faahin ka soo bexeysa Madaafiic caawa ku soo dhacday MUQDISHO
Deg Deg: Bambaanooyin Caawa lagu weeraray isgoyska KM-4 ee Magaalada Muqdisho + cida lala eegtay
Daawo “Amin Arts oo Arrin Murugo leh u saadaaliyey Dalka Somalia
War deg deg+Video: Mamulka Shabeelle State oo lagu dhawaaqay Madaxwayne & Ku xigeeniisa, Maxay Sheegeen (Daawo)
WAR HADA SOO DHACAY: Dagaal Caawa ka dhacay No: 50 iyo Biyo maal oo dib ula wareegay + Wararkii Ugu danbeeyey
Dec 16, 2013 - 1 Jawaab	ShareWarka naga soo gaaraya Deegaanka No 50 ee Gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in Fiidnimadii Caawa uu ka qarxay Dagaal xoogan kadib markii ay Weerar Soo qaadeen Maleeshiyadii Saaka ka baxay Magaalada iyadoona Dagaal Mudo socday kadib dib looga qabsaday Maleeshiyadii Saaka qabsatay.
Wararkii ugu dambeeyey ee caawa naga soo gaaraya deegaanka Lambar Konton ee gobolka Shabellaha hoose ayaa waxay sheegayaan in dagaalkii uu soo idlaaday gacan ku heynta deegaankaasina ay la wareegeen maleeshiyaadka u dagaalmayey beesha biya maal.
Warar is khilaafsan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalka waxaana aad uyar warar dhameystiran oo ku saabsan xaqiiqda wixii dhacay in lasoo tabiyo.
Gudoomiyaha deegaanka lambar konton C/llaahi Waafoow oo aan la xiriirnay waxa uu sheegay inay hadda kusugan yihiin lambar konton beesha habar gidir ciidankii ku dagaalamayey magacooda.
Waxaa hadda jirin khasaaro rasmi ah aan idiin soo gudbin karno laakiin warbaahinta afka beelaha dagaalmaya ku qora wararka ayaa mid walbo waxa uu sheegayaa in guusha ay iyagu gaareen.
Wixii kasoo kordho wararkaasi dib kala socda insha allah (568)
Last reply was 2 months ago	Rubsheeg	View
Nimankaan waxaa loo haystay ineey 20kii sano dhulkaas awood xoogan ku yeesheen oo maba filayn in biyamaal oo kale iskaga celin karo, laakiin wexeey dhiiri gelin u tahay qaba,ilo badan oo beerahoodii iyo guryahoodii sidii 20 sano ka hor loola wareegay weli looga haysto ineey sida biyamaal oo kale Beejada iska gooyaan kana xuraystaan hantidooda mooryaanta ku soo duushay sidii anyaxii